PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - BATHEMBISA LUKHULU ABAHLUBUKE KWAWE-KWAITO
BATHEMBISA LUKHULU ABAHLUBUKE KWAWE-KWAITO
AHLUBUKE emaqenjini ahlukene asungula elawo amalungu amaqembu amabili azakhele udumo emculweni eyibambe kwidbn NYTS nakwiteddy Bears.
Usamkele Soozan Maphumulo nolwazi Slozet Yokwana abahlubuke kwidbn NYTS, bahlangane noshayo Gwala nokheso Dube abebekwiteddy Bears basungula elibizwa ngenew Era.
Ukheso otheleke emahhovisi ELANGA Langesonto ehamba nosoozan, uthe ngemuva kokubona izinto zingasahambi kahle kwiteddy Bears, uthathe isinqumo sokubuyela ethekwini nozakwabo ushayo.
“Kunzima ukuba seqenjini ningenawo umbono ofanayo. Yingakho ngibone kungcono ngibuyele ethekwini ngizokhokha umoya,” kusho ukheso enanela ngokuthi ube nenhlanhla yokuthi ngesikhathi besanda kubuya noshayo, bahlangane nosoozan noslozet abebevele bazana nabo ngesikhathi besesemaqenjini abo.
“Besivele sizwana kakhulu, yingakho ngesikhathi sihlangana ethekwini, sibone ukuba sihlanganise okuthile ngoba sinemibono efanayo. Sibe sesibumba iqembu ngosizo lukagastor Serumulo, osengumphathi wethu,” kusho usoozan.
Bathi bafunde lukhulu ngokuba kula maqembu nangokufeyila kwawo.
“Kwinew Era sizolungisa amaphutha asehlulile emaqenjini ethu. Okuhle wukuthi siyazana futhi sinombono ofanayo ngomculo,” kusho ukheso.
Uqhube ngokuthi ingoma yabo okuqale ukubonakala kwevideo yayo kuleli sonto, izohlanyisa abantu, kwazise inesigqi esithandwa kakhulu kulezi zinsuku, SE-GQOM.
“Siyethemba ukuthi abantu bazoyithanda futhi bayithakasele ingoma yethu,” kusho ukheso ngale ngoma yabo esihloko sithi, “Iyakhuluma”. Bathi basezinhlelweni zokukhipha i-albhamu egcwele ngaphambi kokuba kuphele lo nyaka. lucky.cain@ilanganews.co.za
KUSUKA kwesobunxele ngushayo Gwala, ukheso Dube, usoozan Maphumulo, oqosheme nguslozet Yokwana.